LibreOffice 6.2 waxay hadda diyaar u tahay adeegsiga ganacsiga | Laga soo bilaabo Linux
Mu'asasadda Dukumintiga ayaa ku dhawaaqday daahfurka Cusboonaysiinta dayactirka 6.2aad ee LibreOffice XNUMX, dejinta halbeegga taxanaha loo isticmaali doono bay'adaha ganacsiga iyo dadka isticmaala laylisyada.
Imaanaya shan toddobaad kadib LibreOffice 6.2.5, casriyeynta lixaad ayaa halkan loogu talagalay in lagu daro hagaajinta billaha ah iyo casriyeynta ugu dambeysa ee amniga si loo sameeyo qolka xafiiska dheeraad ah deggan oo lagu kalsoonaan karo.
Taasi waa sababta The Dukumeentiga Foundation hadda waxaan kugula talineynaa taxanaha 'LibreOffice' ee loogu talagalay dadka isticmaala laylisyada iyo goobaha ganacsiga. LibreOffice 6.2.6 waxaa kujira wadar ahaan 44 isbadal.
Marxaladda xigta ee qorshaysan ee LibreOffice 6.2 waxay noqon doontaa LibreOffice 6.2.7, oo ah dayactir dayactir ah oo loo qorsheeyay bartamaha Oktoobar sannadkan oo leh dayactir yar. Intaas kadib, taageerada LibreOffice waxay socon doontaa ilaa Nofeembar 30, 2019, laakiin lama sii deyn doono dheeraad ah cusboonaysiinta amniga wakhtigaas.
Intaas ka dib, haddii aad isticmaaleyso LibreOffice 6.1, oo gaadhay dhammaadkii wareegiisa May 29, ama taxanaha LibreOffice 6.2, waxaan kugula talineynaa inaad cusboonaysiiso nooca 6.2.6 sida ugu dhakhsaha badan. Waxaad kala soo bixi kartaa LibreOffice 6.2.6 bogga rasmiga ah loogu talagalay Linux, MacOS iyo Windows.
LibreOffice 6.3 nooca ayaa sidoo kale yimid bishan, laakiin The Document Foundation waxay kula talinaysaa oo keliya noocyadan kuwa jecel iyo kuwa horumarsan, si la mid ah soo degsashadeeda ayaa laga heli karaa bogga rasmiga ah. LibreOffice 6.3.1 wuxuu imaanayaa dhamaadka bisha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » LibreOffice 6.2 hadda waxay diyaar u tahay adeegsiga ganacsiga